I-Shubunkin Goldfish | Ngeentlanzi
I-Shubunkin yentlanzi, uguqulelo lwayo oluvela eJapan lithetha ukuba bomvu kakhulu neminye imibala, yenye ye iintlobo zeentlanzi zegolide ezaziwayo, eyaziwa ngabantu be-aquarium hobbyists kunye iintlanzi zamanzi abandayo.
I-Shubunkin yintlanzi enomzimba omde kwaye obhityileyo, zombala wecalico, oko kukuthi umxube omnyama, obomvu, omhlophe kunye nohlaza. Nangona kuqhelekile ukufumana iisampuli zebicolor ezinombala obomvu onamabala amnyama nalawo anombala, kwimibala eyahlukeneyo eblowu, nangona kungaqhelekanga kakhulu ukuzifumana.
Zimbini iintlobo zeShubunkin Goldfish, ILondon umsila wayo omfutshane umfutshane kwaye ngokufanayo ngokufanayo ne-golfer kunye ne IBristol esisikwere, kunye neziphelo zee-lobes ezijikeleziweyo. Uhlobo lwe-Bristol lwaphuhliswa eNgilane ngo-1934, kwaye kwisithuba seminyaka engama-50 ezayo indlela yovavanyo yaphuculwa. Ngayiphi na imeko, iisampulu zabantu abadala kufuneka ifikelele kubuncinci beesentimitha eziyi-7.5 kunye nobuninzi be-15 cm.
Le ntlanzi ine ilungile kwaye iphantse yabonakala esikalini. Ngumzekelo onombala omkhulu onombala osisiseko ekuqaleni obomvu oneminye imibala.
I-Shubunkin Goldfish yintlanzi eqinileyo abayidingi inkathalo ekhethekileyoZiyamelana kakhulu nokwahluka kobushushu kunye neemeko zamanzi. Nangona zifuna ukugcinwa kwiindawo ezinamanzi ezinkulu ezinendawo eninzi yasimahla ukuze zidade ngokukhululekileyo kuba ziyintlanzi esebenzayo. Kuyacetyiswa ukuba ubenazo kwii-aquariums ezine Umthamo ongekho ngaphantsi kwe-aquarium engaphantsi kwe-100 yeelitha.
Banokuhlala nge-Ph phakathi kwe-6,5 ukuya kwi-7,5 kunye nobunzima phakathi kwe-10 ukuya kwi-18º. Unga ukufikelela ukumelana namaqondo obushushu angaphantsi kwe-10ºC, ke sinokuthi sibaqwalasele kufanelekile ukuba nabo echibini. Nangona oku akuthethi ukuba abanalo ubuncinane bolondolozo, ngoko ke kucetyiswa ukuba babe nefayile.
Yamkela naluphi na uhlobo lokutya kwaye ilungele abo banamava amancinci ekunyamekeleni iintlanzi zegolide. Uyazi ihlala ixesha elingakanani intlanzi yolu hlobo? Ngenisa ikhonkco esisandula ukukushiya kwaye uya kulazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » I-Shubunkin Goldfish